AmaPhupha oMdanisi weBhaleyi (isiXhosa) – Bridge Books add wishlist show wishlist remove wishlist add compare show compare remove compare preloader
AmaPhupha oMdanisi weBhaleyi (isiXhosa) Jonathan Ball
Eli libali eliyinyani malunga nendlela uMichaela DePrince awasuka ngayo ekubeni ngumntwana ongenabani de waba ngumdansi webhaleyi owaziwa kumazwe ngamazwe. Eli bali elizotywe kakhulu yaye libaliswa ngokuzolileyo. Ngokuqinisekileyo nawe uya kulithanda. Also available in English Authors Michaela and Elaine DePrinceISBN 9780571329731Fromat PaperbackPages 57p.
Eli libali eliyinyani malunga nendlela uMichaela DePrince awasuka ngayo ekubeni ngumntwana ongenabani de waba ngumdansi webhaleyi owaziwa kumazwe ngamazwe. Eli bali elizotywe kakhulu yaye libaliswa ngokuzolileyo. Ngokuqinisekileyo nawe uya kulithanda.